Nakulokhu kuphumelele isintu – Bayede News
Kube ngokokuqala ukuthi imbongi ehaya uMengameli kube ngeyesizwe samaKhoisan
by Bayede-News Posted on 24 June 2019 19 November 2019
INGCINDEZI ephuma kuhlaka oluzimele olumele aMakhosi eNingizimu Afrika iContralesa, igcine iphoqe uSomlomo wePhalamende uNkk uThandi Modise ukuba ashaye ungqimphothwe ngesinqumo sokuhoxisa ukuba khona kwembongi ebongela uMengameli ePhalamende ngaphambi kokwethula inkulumo yakhe yobume besizwe.
Ukuvunyelwa ngomzuzu wokugcina wokuba imbongi iqhubeke nokuhaya uMengameli kuchazwe njengokunqoba nokuphumelela kwesintu nakulokhu. IContralesa ibhalele uMengameli noSomlomo incwadi evuthayo ifuna ukwazi ukuthi kufinyelelwe kanjani kulesi sinqumo.
Kubantu abaningi umbuzo omkhulu ubuthi kanti imbongi ibiza malini okungaze kube yiyo eqhulwini ngokudliwa yizembe uma kongiwa imali. Isinqumo sokuba kuhoxiswe imbongi emcimbini wayizolo ePhalamende esigcine singaphumelelanga, besihambisana nezinhlelo zikaRamaphosa zokwehlisa izindleko. Kuqale ngokuthi umcimbi wokufungiswa kwakhe wenzelwe enkundleni yezemidlalo iLoftus Stadium, ePitoli. Kulowo mcimbi babungekho ubukhazikhazi obujwayelekile emicimbini esezingeni eliphezulu kaHulumeni.
Ukubongelwa komengameli kwaqala ngoMengameli wokuqala ngaphansi kwenkululeko uDkt uNelson Mandela owayebongelwa uZolani Mkiva. Emuva kwakhe kwalandela uMengameli uThabo Mbeki, uMengameli uKgalema Motlanthe noMengameli uJacob Zuma ababehaywa yizimbongi.
UMengameli weContralesa uKgosi uMathupa Mokoena uthe kubukeka kukukhulu okusazokwenzeka njengoba iqembu elibusayo nePhalamende bebe nesibindi sokumemezela ukuthi imbongi angeke ibe khona. Uthe ukuguqulwa kwesinqumo kuwubufakazi bokuthi isintu nobu-Afrika bunamandla ezweni kulesi sikhathi okuphilwa kuso. “Ukubakhona kwembongi ePhalamende kuyindlela yesiko lase-Afrika.
“Asazi ukuthi yini ezolandela. Ngethemba ukuthi i-ANC iyazi into ebiyenza ngoba ngokwesiko lobu-Afrika ukungabikhona kwembongi bekuzoba yichilo elikhulu futhi bekuzogqiba umlando njengoba noMandela wayehaywa ema ezokwethula inkulumo ePhalamende,” kusho uKgosi uMokoena.
“Ukube uSomlomo wePhalamende uNkk uThandi Modise ukuvumelile ukuba kuhoxiswe imbongi ubezothwala kanzima kule minyaka emihlanu ngoba ubezobe ephambene nomlando nesiko lePhalamende. Ngisho uSomlomo wokuqala wePhalamende uNkk uFrene Ginwala owayezizonda izinhlaka zoBukhosi kodwa wayengakwazi ukuvimbela ukuba khona kwembongi. Kunabantu abamenywayo ePhalamende bakhokhelwe yilo uqobo bayohlala nezicukuthwane abanye behuqa ubuthongo bengezwa nokuthi uMengameli uthini, kodwa bese kuthiwa kongiwa imali ngokuhoxiswa kwembongi”.
UKgosi uMokoena uthe njengoba naye ahlala ePhalamdende iminyaka eli-15 eyilungu uyazi ngosiko lwakhona yingakho bebatshelile abaphethe ukuthi sekubonakala izinto ezithinta ezomdabu nendabuko sebezikhohlwa. Uthi babakhumbuze ukuthi leli yiPhalamende lase-Afrika. Uthe ukube i-ANC iqhubekile nalesi sinqumo ibizobe izithele ngehlazo noMengameli wayo uRamaphosa. Lolu daba bese lungenelwe nawuMkhandlu Wamasiko iHeritage Council ebifuna imbongi ingahoxiswa.
UDkt uSipho Sithole oyisishabasheki samasiko nomsunguli neNative Rhythm Records, uthi ukuba khona kwembongi kusuke kundlalela inkulumo kaMengameli futhi kuyisitatimende esibalulekile ngokusuke kuzoshiwo uMengameli. USithole uthe uphatheke kabuhlungu ukuthi ngesikhathi uMengameli uRamaphosa esevumile ukuthi ezamasiko nobuciko zineqhaza elimqoka ekubumbeni isizwe kodwa wabe esevuma ukuthi ingabikhona imbongi ePhalamende.
Uthe iqhaza lembongi libalulekile ngoba inamandla futhi iyona ekwazi nokuhaya iNkosi nangezinto ezibonayo nezaziyo ezingeke zakhulunywa nanoma wubani. Imbongi uZolani Mkiva ithe sekukhona ukucabanga ukuthi ukuba khona kwembongi kuwukubukisa nokujabulisa abantu, kanti empeleni imbongi ichaza ukuthi thina ma-Afrika singobani, ichaza ubuntu nobu-Afrika.
“Ukusetshenziswa kwembongi kumele kube yinto esemthethweni ngoba izwi lembongi liyizwi lalabo abangakwazi ukuzwakala, liyizwi lobabamkhulu, lisixhumanisi nokuthi siphumaphi futhi siyaphi”.
Enkulumweni yakhe yobume besizwe uMengameli uCyril Ramaphosa uthe wethula lenkulumo esikhathini lapho kuphela iminyaka eli-106 abantu behliswa isithunzi bezithole bengondingasithebeni ezweni labo ngenxa yomthetho iNative Land Act. Uthe izibazi zalo mthetho zisekhona nanamuhla. eqhuba uthe eminyakeni engama-25 yenkululeko kuningi osekwenziwe ukuhlangabezana nezidingo zansukuzonke zabantu baseNingizimu Afrika. Uthi kuhlanganwa lapho izwe libhekene nezinselelo ezinkulu njengokungakhuli komnotho futhi nemisebenzi eyanele ezweni ayikho. “Lokhu kuthinta wonke umuntu kusuka entsheni, omama, abasebenzi imiholo yabo engakwazi ukwenza zonke izinto, kuhlukumeza abafundi emanyuvesi okumele bathembele emalini encane abayitholayo ukuze bakwazi ukuzondla,” kusho uMengameli uRamaphosa.
“Sibazwile abantu bakithi bekhuluma nathi singena siphuma ezindlini zabo kanye nabanye abaholi kusuka kuMaimane, uMalema, iNkosi uButhelezi, uGroenewald, uMoshoe, uHolomisa, uZungula noDe Lille, nabo benze okufanayo behambela izwe lonke belalele abantu,”
UMengameli uthe abantu baseNingingizimu Afrika bababekele konke futhi babalalela. Uthe insila yobandlululo ishiye izwe lishayekile futhi ngesikhathi esifanayo kumele babhekane nezinselelo zalesi ezikhona ezweni. Uthi ngesikhathi beqhamuka nohlelo iNational Development Plan ngowezi-2012 bathola ukwesekwa nangamanye amaqembu kodwa abakafiki lapho kumele engabe bakhona futhi ikhona ingozi yokuthi kushaye isikhathi abazinqumele sona bengakakuzuzi abazibekele khona.
Uthi manje isikhathi sokugxila kokumele kwenzeke, isikhathi sokuba izinto zenzeke njengoba nabantu bebesho ukuthi isikhathi sokukhuluma sesiphelile. UMengameli uvumile ukuthi angeke bakwazi ukwenza zonke izinto ngesikhathi esisodwa. Uthe bazogxila ezintweni eziyisikhombisa abale kuzo ukuthuthukiswa komnotho nokudalwa kwamathuba emisebenzi, ukucijwa kwamakhono kwezemfundo nezempilo, ukuhlanganiswa kwezwe okukhethekile nokwenza ngcono ohulumeni basekhaya, ukubuyisana nokwakha i-Afrika engcono nomhlaba ongcono.
UMengameli uthe kunesidingo esinqala sokuba kubekwe phambili impilo yabantu. Uthe ugogo oneminyaka engama-80 akakwazi ukulinda usuku lonke esibhedlela elinde imithi yakhe, futhi nesiguli asikwazi ukubuyiselwa emuva ngoba kuthiwa udokotela akekho. Uthe baphothula iPresidential Health Summit Compact ezophendula okuningi ngezempilo okuhlanganisa nohlelo iNational Health Insurance (NHI). Uthi bazibophezele ukuthi ngoZibandlela wezi-2020 babe sebesehlisile isibalo sabantu abanegciwane.
“Kuyasikhathaza ukuthi kunezingane eziningi ezikhubazekile ezingekho ezikoleni”. Ekhuluma ngomholo osemthethweni uthe kuyacaca ukuthi ziningi izinkampani ezihambisanayo nokukhokhala abasebenzi umholo osemthethweni.
Posted in Izindaba, Kuleli sonto kwelaboHlanga